Hevitra bizna any dago - Dinika forum.serasera.org
Hevitra bizna any dago
Fitohizan'ny hafatra : Hevitra bizna any dago
alexandra32 - 20/07/2017 21:49
pièce fiarakodia na koa pièces fiara vaventy ireny (camions, semi-remorques), mbola azo atao hoe malalaka; marina fa hoe be investissement fa tena mbola mandeha sady mampidi-bola maro
sakafo ho an'ireo manak'atao, izany hoe karazan-tsakafo maro, very sy laoka ireny,no sady misy livraison, kanefa tsy gaboraraka
manao jus natoraly, fromage blanc
Bonasolofo - 18/05/2018 11:13
Salama tompoko! Izaho malagasy mpikamabana vaovao.Miala tsiny fa tsy hitako ny toerana tokony hametrahako azy ity.
Izaho dia maçon efa zah draharaha sy efa manana traikefa mitady asa momban'ny trano.Mahay ny rehetra tsy mifidy na asa kely na lehibe no atao.afaka foana.Raha mahaliana anao dia mandefasa mp ao amin'ny facebook "Randriamampianina Pierre François" na hiantso ny laharana etsy ambany.De efa misaotra mialoha tompoko!!!
Contact:0332129729 Afaka antsoina amin'ny ora rehetra! Veloma daholo !!